रिस उठ्यो भन्दैमा महिला माथि झुक्केर कहिलै पनि यी २ शब्दको प्रयोग नगर्नुहोला ! जान्नु होस !! - Daily Lokmandu
मुख्य पृष्ठ /समाचार/रिस उठ्यो भन्दैमा महिला माथि झुक्केर कहिलै पनि यी २ शब्दको प्रयोग नगर्नुहोला ! जान्नु होस !!
काठमाडौँ। हिन्दुधर्म शास्त्रमा आफ्नो घरको महिलालाई लक्ष्मीको दर्जा दिइएको छ भने जुन घरमा महिला खुसी छिन् त्यो घर स्वर्ग सरह हुन्छ भनिएको छ । घरलाई उज्यालो र पवित्र बनाउनको लागी सबैभन्दा पहिले महिलालाई खुसी बनाउँनुपर्दछ । महिलालाई अपमान गर्ने र नराम्रो व्यवहार गर्नलाई लक्ष्मीले श्राप दिने र घरमा आर्थिक संकट, दुःख कष्ट आउँछ । जीवनलाई सहज तरिकाले अगाडी बढाउन चाहना हरेक महिला र पुरुषको हुन्छ । सहज बनाउनको लागी महिला पुरुषले आफूले गर्न सक्ने मेहनत गरेका हुन्छन् । महिलालाई लक्ष्मीको दर्जा दिएता पनि त्यस्तो व्यवहार गरिएको खासै पाइदैन् । रिस उठेमा घरका सदस्यले विभिन्न किसिमका अपशब्द प्रयोग गर्ने गर्दछन् ।
जब महिलालाई यस्ता अपशब्द प्रयोग गरिन्छ, तब त्यस्ता शब्द प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई लक्ष्मी माता रुष्ट भएर श्राप दिन्छन् ।
महिलालाई कुन शब्दले गाली गर्ने भन्ने कुराको बारेमा सबैजसोलाई थाहा भएपनि रिसको आवेग र होश गुमाउँदा धेैले आफ्नो घरमा रहको महिलालाई अपमानजनक शब्दको प्रयोग गरेका हुन्छन् । जीवनलाई अगाडी बढाउनको लागी धेरैले नचाहदा नचाहदै विभिन्न किसिमको काम गर्न बाध्य भएका छन् । केहि महिलाहरु आफ्नो दैनिकी चलाउनको लागी यौनजन्य कार्यमा पनि संलग्न हुन्छन् । हाम्रो समाजमा महिलालाई वेश्या शब्दको प्रयोग गर्दछन् । तर यो शब्द बिर्सेर पनि आफ्नो घरमा रहेका महिलालाई प्रयोग गर्नुहुदैन् ।
यस्ता शब्दको प्रयोग गर्दा लक्ष्मी माता रुष्ट हुने र घरमा अशान्ति, आर्थिक संकट र विभिन्न किसिमको बाधा सिर्जना हन्छ । त्यस्तै कुनै प्राकृतिक कमीको कारणले गर्दा महिला सन्तान जन्माउनबाट बन्चित भएकी हुन्छन् । यस्ता महिलालाई समाजमा नराम्रो नजरबाट हेरी बाझी भन्ने शब्दको प्रयोग गरिन्छ, तर यो शब्दको प्रयोेग गरेमा यस्ता व्यक्तिले जीवनभरी असफताको भुमरीमा फस्ने गर्दछन् । शास्त्रमा उल्लेख भए अनुसार यस्ता दुई शब्दको प्रयोग गर्नु आफ्नो जीवनलाई बिग्रानु हो ।